ချောကလက်ကျူးပစ်လေး: December 2011
တစ်ခါမှမရေးဖူးတော့ ဘယ်လိုရေးရမှန်းမသိလို့ စာမေးပွဲဖြေသလို သိတာလေးတွေချရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
♥ ခရစ်စမတ် ရောက်ခါနီးရင် စိတ်လှုပ်ရှား ပျော်ရွှင်မိပါသလား။
ခရစ်စမတ်ရောက်ခါနီးရင် စိတ်လှုပ်ရှား ပျော်ရွှင်မိတဲ့နှစ်တွေ ရှိပါတယ်။ နှစ်တိုင်းတော့မပာုက်ပါဘူး။ မနှစ်ကဆိုပျော်တယ်။ ဘာလို့ပျော်လဲ၊ စိတ်လှုပ်ရှားလဲဆိုတော့ ခရစ်စမတ်ရှိုးကို ကိုသွားချင်တဲ့သူနဲ့ သွားလိုက်ရလို့ပါ။ ဒီနှစ်တော့ မပျော်တော့ပါဘူး..:( ။
♥ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ကို ခရစ်စမတ် သစ်ပင်၊ decoration ornaments များနဲ့ အလှဆင်လေ့ ရှိပါသလား။
ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ကိုတော့ ခရစ်စမတ် သစ်ပင်တွေ ဘာတွေနဲ့ တစ်ခါမှအလှမဆင်ဘူးပါဘူး။
♥ နှင်းတွေ အေးခဲနေတဲ့ နေရာကို သွားရောက်လည်ပတ်ချင်ပါသလား။ တကယ်လို့ နှင်းတွေကြားမှာ လက်ရှိနေထိုင်နေရင် နှင်းမပါတဲ့ ခရစ်စမတ်နဲ့ နှင်းဖြူဖြူတွေ ကျရောက်နေတဲ့ ခရစ်စမတ် ဘယ်အရာကို ပိုနှစ်သက်မိလဲ (ရွေးချယ်ခွင့် ရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့)။
နှင်းတွေ အေးခဲနေတဲ့ နေရာကို အရမ်းသွားချင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်အပြီးပါ သွားနေချင်တာ။(အအေးပိုင်းဆိုတော့ မဲနေတဲ့အသားတွေဖြူသွားအောင်လို့..:P ) ။ တကယ်လို့ ကျွန်တော် သာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ယုံကြည် သက်ဝင်သူတစ်ယောက်သာ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နှင်းတွေကျနေတဲ့ ခရစ်စမတ်ကိုပဲဖြတ်သန်းချင်ပါတယ်။ ဖြူဖြူ ဖွေးဖွေး နှင်းတွေကိုမြင်ရတာ စိတ်အေးချမ်းတယ် လို့ခံစားရလို့ပါ။ နှင်းလေးတွေချစ်လို့လဲပါ ပါတယ်(နှင်းတွေကအရောင်မရှိဘဲ ဖြူစင်လို့ပါ)။
♥ ခရစ်စမတ်ပိတ်ရက်ကို ဘယ်လို ဖြတ်သန်းချင်ပါသလဲ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ခရီးထွက်တတ်ပါသလား။
ခရစ်စမတ်ပိတ်ရက်ကို အေးအေးဆေးဆေးပဲဖြတ်သန်းချင်ပါတယ်။ ခရီးတော့ထွက်လေ့ထွက်ထမရှိပါဘူး။
♥ ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေကို ဘယ်လို လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးဖြစ်လဲ။
လက်ဆောင် ဘယ်သူ့ကိုမှမပေးဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ် တော့ရဖူးတယ်။
♥ ခရစ်စမတ်မှာ အမှတ်တရလေးတွေ ရှိခဲ့ဖူးရင် ပြောပြပေးပါ။
ခရစ်စမတ်မှာတော့ အမှတ်တရတော့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခရစ်စမတ်မရောက်ခင် ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက အမေ့သူငယ်ချင်း ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် အဒေါ်ကြီးက သူတို့အဖွဲ့တွေနဲ့ သီချင်းလာဆိုတာကို အမေကလိမ္မော်သီးတွေဝယ်ပြီး ထွက်ပေးတာ လိမ္မော်သီးတွေ မပေးချင်လို့ ဧည့်သည်တွေရှေ့ မြေကြီးမှာလူးပြီးငိုဖူးတယ်။ ပိာုအဒေါ်ကြီးကယူရမလိုမယူရမလိုနဲ့။ ဧည့်သည်တွေလဲပြန်သွားရော ကျွန်တော်လဲ အမေနှက်တာ တော်တော်လေး ခံလိုက်ရတယ်။
♥ နှစ်သစ် အကြိုညမှာ ဘယ်သူတွေနဲ့ အတူတူ ရှိနေချင်ပါသလဲ။
နှစ်သစ် အကြိုညမှာ ဘယ်သူတွေနဲ့အတူရှိချင်လဲဆိုတော့ အမေနဲ့အမ ပြီးတော့ (…)ပေါ့…:P
ဒါပေမယ့်ခုတော့ အခန်းဖော်ကျက်သရေတုံးတွေနဲ့ပဲ ရှိနေရမှာပါ :( (စိတ်ပျက်လိုက်တာဗျာ..)
♥ New Year Eve မှာ countdown ပြုလုပ်လေ့ ရှိသလား။ အမှတ်တရများ ရှိခဲ့ရင် ပြောပြပေးပါ။
လုပ်လေ့တော့မရှိပါဘူး။ နယူးရီးယားနဲ့ပတ်သက်လို့ အမှတ်တရလဲ သိပ်မရှိပါဘူး ။ ကွန်ပြူတာရှေ့မှာတင် နယူးရီးယား ကိုဖြတ်သန်းခဲ့တာနှစ်နှစ်ရှိပြီ..။
♥ နှစ်သစ်ကို ကုန်ဆုံးစေချင်တဲ့ နေရာသီးသန့်မျိုး ရှိပါသလား။ အလည်အပတ် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ ဖော် ပြ ပေး ပါ။
နှစ်သစ်ကို ကုန်ဆုံးစေချင်တဲ့ နေရာသီးသန့်မျိုး ဆိုရင်တော့ နယ်ကအိမ်ကိုပဲ ရွေးမိမှာပါ ။ (အမေ့ကိုလွမ်းလို့) နယူရီးယားမှာ အလည်အပတ် အစီအစဉ် တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။
♥ နှစ်သစ်မှာ New Year Resolution အနေနဲ့ ဘာတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး အကောင်အထည် ဖော်တတ်ပါသလဲ။
♥ နှစ်တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အပေါ် လွမ်းမောတသတာမျိုး၊ အချိန် မကုန်စေချင်တာမျိုး ရှိတတ်ပါသလား။ ရှိတယ်။ အသက်ကြီး ကြီးသွားတာကို (ပီား.. သားက အသက်အရမ်းငယ်ချင်တာ..ဗျာ့..:P)
♥ နှစ်သစ်ရောက်ရင် ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေတွေကို ပို့စ်စကဒ်များ၊ e-card များနှင့် နှုတ်ခွန်းဆက်တာမျိုး ရှိပါသလား။
♥ ထပ်ပြီး ဖြည့်စွက် ရေးချင်တာက....။
ခရစ်စမတ်နဲ့နှစ်သစ်ကာလကို ချစ်ခင်ရပါသော အွန်လိုင်းပေါ်မှ Blogger ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ် ကိုကို မမ ညီ ညီမလေးများ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာ ဖြတ်သန်း နိုင်ကြပါစေဗျာ။
ဒီပို့စ်လေးရေးဖို့ တဂ်တော်မူပေးကြတဲ့ မမချိုချဉ်(candy)နဲ့ သမံစီး (ခေါ်) ဂျင်စန်မှီ တို့လဲ နှစ်သစ်မှာဝက်ဝက်ကွဲ အစွံ့ထုတ်နိုင်ပါစေလို့…။
ဒီလို တဂ်ပို့စ် ကဒါပထမဆုံးရေးဖူးတာမိုလို့အမှားအယွင်းပါရင် ခွေးလွှတ် အဲလေပာုက်ပါဘူး ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။။
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 9:42 AM 13 စာဖတ်သူတို့အမြင်
သီချင်းနာမည်က အခိုက်အတန့် ဖြစ်ပါတယ်။
တေးရေးကတော ရွှေထိုက် ပါ။
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 8:37 AM7စာဖတ်သူတို့အမြင်
တကယ်တော့လွယ်မယောင်နဲ့ တော်တော်ခက်ကြတာ အားလုံးလည်းသိမှာပါ။
ဒီတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးကို ရည်းစားစကား စမပြောခင်မှာ ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာလေး တွေကို အောက်မှာဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်။
သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခင်အောင်ကြိုးစားပါ။
မင်းသူမကို စိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုတာနဲ့ သူမနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့
ခင်မင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကောင်မလေးတော်တော် များများ(၇၀%)
လောက်ဟာ ရည်းစားရွေးပြီဆိုရင် အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေကို တိုင်ပင်တက်ကြလို့ပါ။
သူမ မင်းကို ယုံကြည်လာအောင်ကြိုးစားပါ။
ယုံကြည်လာအောင်ကြိုးစားပါလို့ ပြောတဲ့နေရာမှာလည်း လိမ်လည်လှည့်ဖြားတာမျိုး
ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ရုပ်ရည်ထက်၊ သူရဲ့ အပြုအမူ၊ အလုပ်အကိုင်၊ အဆင့်အတန်းတွေကို သူမရဲ့ယုံကြည်မှုမှာထည့်တွေးတက်ကြလို့ပါ။ ဒီအပြုအမူ အဆင့်အတန်းတွေကို
သူမနဲ့တွေ့ရင်ကြင်နာပြပါဆိုတာကလည်း အရမ်းအိုဗာ ဖြစ်ဖို့တော့မလိုပါဘူး။
တော်သင့်ရုံပေါ့။ ဥပမာ-သူ့မရဲ့ထီးကိုကိုင်ပေးတာမျိုး၊ သူမ စားမဲ့မုန့်ကိုယူ ပေးတာမျိုး၊
သူမသောက်မဲ့ ရေဘူးကို ဖောက်ပေးတာမျိုးပေါ့။ ဒီလိုလုပ်ပေးတဲ့နေရာ မှာလဲ
တကယ်တော့ ကောင်လေးတော်တော်များများဟာ ရည်းစားစကားမပြောခင်မှာ
ကောင်မလေးကကိုယ့်ကိုဘယ်လို သဘောထားလည်းဆိုတာ နားလည်တယ်လို့တော့
ထင်ပါတယ်။အောက်ကအချက်လေးတွေ သူမမှာတွေ့နေရင်တော့ သေချာပါတယ်။
သူမ မင်းကိုပြန်ချစ်မယ်လို့ (55%) ယူဆနိုင်ပါတယ်။
1. တစ်နေရာရာသွားမယ်ဆိုတိုင်း မင်းကိုခေါ်နေပြီဆိုရင်
2. မင်းကသူ့မကို ပိုးပန်းတဲ့ အနေနဲ့ သူ့မရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို မုန့်ကျွေးနေတာကို
3. မင်းအကြောင်းတွေကို သူ့မသူငယ်ချင်းတွေဆီမှာ မေးနေရင်
4. မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတိုင်း သူမမျက်နှာမကောင်းဘူးဆိုရင်
5. မင်းပျော်နေတဲ့ အခါသူမမျက်နှာ ပြုံးနေရင်
6. “နင်ဒီအကျီင်္နဲ့ မလိုက်ဖူး” စသည်ဖြင့် မင်းရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေမှာ စွက်ဖက်လာပြီဆိုရင်
7. မင်းငွေတွေ အပိုသုံးနေတာတွေကို သူမ မကြိုက်ကြောင်းပြောလာပြီဆိုရင်
8. မင်းတိုးတက်ဖို့ သူမဂရုတစိုက်နဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေ လုပ်လာပြီဆိုရင်
စသည်ဖြင့် မင်းကိုဂရုစိုက်လာခဲ့ရင်တော့ သူမက မင်းကိုပြန်ချစ်ဖို့ သေချာသလောက်ရှိ နေပြီလို့
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 8:46 PM7စာဖတ်သူတို့အမြင်
မြို့လေးတစ်မြို့၏ ဆည်းဆာချိန်ရဲ့ တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုပေါ်မှာ အဘွားအိုတစ်ယောက်ပာာ ပျောက်ကွယ်တော့မယ့် နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးပြုံးနေတယ်။ သူမရဲ့အပြုံးထဲမှာ ကျေနပ်မှုတွေ အများကြီးပျော်ဝင်နေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ သူမရဲ့အပြုံးတွေပာာ လင်းလက်တောက်ပပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ လှပလို့နေတယ်။
မောင်နဲ့ကျွန်မချစ်ခဲ့တာ နှစ်တွေတော်တော် ကြာခဲ့ပြီလေ ။ ပိာုးအရင်ခေတ်တွေတုန်းက ချစ်သူစုံတွဲတွေပာာ ချစ်သက်တမ်း သုံးနှစ်ပြည့်တာနဲ့ လက်ထပ်ကြတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် လက်ထပ်ဖို့ ကိစ္စကို မောင်ရော ကျွန်မပါ မစဉ်းစားရဲကြသေးပါဘူး။ မပြည့်စုံတဲ့ဘ၀နှစ်ခု နဲ့ ယိုင်နဲ့နေတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို မတည်ဆောက်ချင်ဘူး ၊ ကြိုးစားချင်သေးတယ် မောင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်မလဲ အဲဒီစကားအပေါ် အကြွင်းမဲ့ ထောက်ခံမိတယ်။ ဘာပဲပြောပြောလေ ငွေမရှိဘဲ ကျပ်တည်းကျဉ်းမြောင်းတဲ့ မင်္ဂလာဦးကာလ တွေ ကို မဖြတ်သန်းချင်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် အမြန်ဆုံးပေါင်းစပ်နိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို မောင်နဲ့ကျွန်မ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မ နဲ့ အဝေးတစ်နေရာ မှာမောင် ကျောက်တူးတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ဖို့ပါ။
မောင်အဝေးကိုမသွားခင် မောင် နဲ့ ကျွန်မ ကတိသစ္စာပြုခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မက မောင် ပြန်လာမယ့် အချိန်ကို သစ္စာရှိရှိစောင့်နေပေးဖို့ရယ် ၊ မောင်ကလဲ ကျွန်မဆီကို အမြန်ဆုံးပြန်လာဖို့ရယ်ပါ ။ပြီးတော့ မောင်က နေမင်းကြီး ထာဝရပျောက်ကွယ်မသွားခင်အထိ ဒီတောင်ကုန်းလေး ပေါ်မှာ ညနေဆည်းဆာချိန်တိုင်း စောင့်နေပေးပါတဲ့ ။ တစ်နေ့တာအချိန်ကုန်ဆုံးတိုင်း နေမင်းကြီး ပာာ ပျောက်ကွယ်သွားတက်ပေမယ့် ဒါပာာ ခေတ္တ ပျောက်ကွယ်မှုပါပဲ။ နောက်တစ်နေ့ အတွက် ထွန်းလင်းဖို့ အားယူနေတာလေ။ ဒီလိုပဲ မောင်ပာာ ကျွန်မရှေ့က ခေတ္တ ပျောက်ဆုံး သွားပေမယ့် မကြာခင်မှာ အားသစ်တွေ နဲ့ ကျွန်မတို့ အတူပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့ သူပြန်လာမှာပါ။
ဝေးနေတဲ့အချိန်တွေမှာမှ အလွမ်းဆိုတာကို ကျွန်မ သေသေချာချာ နားလည်လာမိတယ်။ လွမ်းတယ်ဆိုတာ လူခြင်းဝေးကွာ နေတာကြောင့် မပာုက်ပါဘူး နှလုံးသားခြင်း ဝေးကွာနေတာကြောင့် ဖြစ်လာရတာပါ။ မောင်နဲ့ ဝေးကွာနေတဲ့ ကျွန်မရဲ့ နှလုံးသားပာာလည်း လွမ်းတယ်ဆိုတဲ့ အရသာကိုခံစားတက်နေပြီ။ စာမလာ သတင်းမကြား နဲ့ အလှမ်းဝေးလှတဲ့ ကျောက်တွင်းတွေ ရှိရာက မောင့်ကို ကျွန်မ ဆက်သွယ်ဖို့ ရာ ဘယ်လို့မှမတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မယုံတယ် ။ မောင် လဲကျွန်မကို လွမ်းနေမယ်ဆိုတာ..။
မျှော်လင့်ချက် ဆိုတာ လူတွေရဲ့အသက်ကို ပိုရှည် စေတယ်တဲ့ ။ အဲဒီလိုကြားဖူးပါတယ်။ တကယ်သာမှန်ခဲ့ရင် ကျွန်မ တော်တော်လေးကို အသက်ရှည် ဦးမှာပါ ။ မောင့်အပေါ်ထားတဲ့ မျှော်လင့်ချက် တွေကြောင့် ပေါ့။ မောင်ပြန်လာမယ် ဆိုတာ သေချာသိနေလို့ နေ့တိုင်း မျှော်လင့်မိနေတယ်။ မျှော်လင့်ချက်အတွက် စောင့်စားနေရတဲ့ နေ့ရက်တွေ ကြားမှာ ကျွန်မ ပျော်နေတက်ပါပြီ ။ မောင်လဲ မျှော်လင့်ချက် တွေကြားမှာ ပျော်နေမယ်ဆိုတာ ကျွန်မ ယုံနေတယ်။
မောင် ပြန်လာမယ့် ရက်တွေ နီးကပ်လာပြီ ဆိုတာကို ကျွန်မ နှလုံးသား က အလိုလိုသိနေခဲ့တယ်။ ဒါမောင် နဲ့ကျွန်မ ရဲ့ဘယ်သူ မှမသိတဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ အရာပါပဲ။ မောင် ပြန်လာခဲ့ရင် ကျွန်မတို့ ပျော်စရာဘ၀လေး ကို တည်ဆောက်ကြတော့မှာလေ။ အချစ် တွေနဲ့ပြည့်နေမယ့် ကျွန်မတို့ ဘ၀လေး ထဲကနေ အဝေးကို မောင်ရော ကျွန်မပါ ဘယ်တော့မှထွက်ခွာ သွားတော့မှာမပာုက်ဘူး။
နေမင်းကြီး ခေတ္တ ပျောက်ဆုံးသွားတက်တဲ့ ဆည်းဆာချိန်တိုင်း ဒီတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာ မောင်ကိုတွေ့ ဖို့ ကျွန်မစောင့်နေမိတယ် ။ ပျောက်ကွယ်လုနိုးနိုး နေမင်းကြီးထဲမှာ မောင်မျက်နှာကို ကျွန်မတွေ့တွေ့နေရပါတယ် ။ ခပ်ပြုံးပြုံး မောင့်မျက်နှာမှာလဲ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်နေတယ် ။ မကြာခင် ပြန်လာတော့မယ့် မောင့်ကို စောင့်စားမိနေတဲ့ ကျွန်မမျက်နှာမှာလဲ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပြည့်နေတယ်။
မြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့ တောင်ကုန်းလေးထက်မှာ အဘွားကြီးတစ်ယောက် ညနေဆည်းဆာချိန်တိုင်း ရောက်လာပြီး ပျောက်ကွယ်လုဆဲဆဲနေမင်းကြီးကို ခပ်ပြုံးပြုံးကြည့်နေတက်တာကို အဲဒီမြို့ကလူတိုင်း သိကြပါတယ်။ ကျောက်တူးသွားရင်း ကျောက်တွင်းပြိုပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူကို ပြန်လာနိုးနိုး နဲ့စောင့်နေခဲ့တဲ့ ရူးသွပ်နေတဲ့ အဘွားကြီး ရဲ့ ရင်နင့်စရာဇာတ်ကြောင်းလေး ကိုရောပေါ့။
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 10:58 PM4စာဖတ်သူတို့အမြင်
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 5:19 AM 11 စာဖတ်သူတို့အမြင်
အခန်းဖော်တွေပြောနေကြလို့ ကျွန်တော် ၀ရန်တာကိုထွက်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။တစ်ဘက်အခန်းက ကျွန်တော်နဲ့ ခင်မင်သိကျွမ်းတဲ့ မော်ဒယ်ကောင်မလေး ကိုပြောနေတာမှန်း အဲဒီတော့မှ သိလိုက်ပါတော့တယ်။ ခေတ်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့ စပွန်ဆာ ဆိုတဲ့စကားက စိမ်းမနေပါဘူး..အမြဲတမ်း ကြားနေရတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပါ။ကြားနေကျစကားလုံးဖြစ်ပြီး ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတာကိုလဲ ကောင်းကောင်းကြီးသိလို့စပွန်ဆာဆိုတဲ့စကားလုံးကို အရမ်းလဲမုန်းမိတယ်၊အမြင်လဲကပ်မိပါတယ်။ ခက်တော့လဲခက်ပါတယ်.. ဒီနေ့လိုခေတ်ကြီးထဲမှာ စပွန်ဆာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း ကိုလူငယ်တော်တော်များများက နေရာတကာမှာ ဖက်ရှင်တစ်ခုလို ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန့်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။တချို့လူငယ်တွေဆိုရင်စပွန်ဆာဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ် ဂုဏ်ယူကျေနပ်သလို ပြောဆိုနေကြတာ တွေ့နေရပြီး ဒါပာာ ကိုယ်ပိုင် အရည်အသွေးတွေ ဆုံးရှုံးဖို့လမ်းစ ဆိုတာ မသိလေလျော့ လားလို့ကျွန်တော် တွေးပူပြန်ပါတယ်။ ခုလဲအဲဒီကောင်မလေး အတွက်ပါ ကျွန်တော်တွေးမိပြီး ရင်မောမိပြန်ပါတယ်။ ကောင်မလေးက မသကာ ရှိလှမှ ဆယ်ရှစ်၊ဆယ့်ကိုးအရွယ်ပါ။ ကိုယ့်ညီမလေး အရွယ်လဲဖြစ်၊ ခင်မင်သိကျွမ်းပြီးသားဖြစ်လို့ ကျွန်တော် ဒီကောင်မလေးကို ဆုံးမဖို့တာဝန်ရှိသလို ခံစားမိပါတယ်။ဒါကြောင့် ရှိပြီးသား အရည်အသွေးကို အကောင်းဆုံးမသုံးမချဘဲ အမြင့်ကိုအလွယ်တကူ ခုန်တက်ချင်တဲ့ ကလေးမကို ဆုံးမကြည့်ဖို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတယ်။
တစ်ရက်မှာ အဲဒီကောင်မလေးနဲ့ ကျွန်တော် ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာအတွက်ချိန်းတယ်ဆိုတာ သေချာမသိပေမယ့် သူ့ကိုမမြင်မတော်ရင် မကြာခဏဆုံးမတက်သူ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တစ်ခုခုကိုပြောတော့မယ်ဆိုတာ သူသိနေပါတယ်။
ညီမလေး…အကိုအနေနဲ့ မင်းကို ညီမလေးတစ်ယောက်လိုသဘောထားတာရော၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပတ်ဝန်းကျင်က ပြောတာတွေ အကိုအနေနဲ့ကြားထဲက မခံနိုင်တာရယ်ကြောင့် ညီမလေးကို ပြောစရာစကားလေးတွေရှိလာလို့ပါ
ဘာကိုပြောချင်တာလဲအကို…ပိာု သူများတွေပြောနေကြတဲ့ ကိစ္စကိုလား..
ကောင်မလေးက မျက်လွှာလေးချရင်း ခပ်တိုးတိုးအသံနဲ့ဆက်ပြောပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး တော့ အကိုညီမကိုမပြောခင် ညီမလေး ပြောတာတွေအရင် နားထောင်ကြည့်စေချင်တယ်။ ညီမဆယ့်ငါးနှစ် သမီးအရွယ်မှာ ညီမအဖေဆုံးခဲ့ရတယ်…။ဈေးတောင်းခေါင်းရွက် ရောင်းစားရတဲ့ ဈေးသည်အမေက ညီမကို ပညာတက်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အိမ်မက်အမြဲမက်ခဲ့တယ်။ ခေတ်ပညာတက်တစ်ရောက်ဖြစ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ငွေကြေးကိုလဲ သူမတက်နိုင်ရှာတော့ သူ့ငယ်သူငယ်ချင်းပွဲစား တစ်ယောက်ကို သူလက်ထပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပွဲစားက လူကောင်းသူကောင်းမပာုက် ဘဲ ညီမကို ထိကပါးရိကပါး လုပ်ဖို့ကြိုးစားလာလို့ ညီမ အိမ်ကထွက်ပြေးလာခဲ့မိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရန်ကုန်ရောက်တော့ အလှပြင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ၀င်လုပ်ရင်းကဆိုင်ရှင်ရဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့် ကိုကြီးနဲ့ညီမတွေ့ခဲ့ရပါတယ်..။သူ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ညီမမော်ဒယ်သင်တန်းတက်ခဲ့တယ်..အနုပညာလောကထဲ တိုးဝင်ဖို့ကြိုးစားမိခဲ့တယ်။ ဒီလို ရင်းနှီးလာရာက အားကိုးချင်တဲ့စိတ်ရယ်၊ ရင်းနှီးမှုလဲပိုလာတာရယ်ကြောင့်သူနဲ့ညီမ ချစ်သူတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ချစ်သူဆိုပေမယ့် အားကိုးဖို့ ၊မှီခိုဖို့ ဆိုပိုမှန်တော့ထင်ပါတယ်။ ဒီအနုပညာလောကမှာနေရာ သေးသေးလေးပိုင်ထားရတဲ့ အချိန်မှာ ညီမသိလိုက်ရတာက သူ့မှာမိန်းမနဲ့ကလေးရှိနေတယ်…အကိုရယ်..။ ဒါပေမယ့်ညီမနောက်ဆုတ်ဖို့နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ..။ အနုပညာလောကထဲတိုးဝင်စပြုနေတဲ့ ညီမအတွက်လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာက သူပဲရှိတော့ ညီမသိသိကြိးနဲ့ပဲ ဆက်ပြီးတွဲနေခဲ့ရတယ်…။ သူ့အမျိုးသမီးလဲ လာပြီးတော့ ညီမကိုတောင်းပန်ခဲ့တယ်..။ ညီမမိန်းမသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာခဲ့ပါတယ်အကိုရယ်..။ ကလေးကိုလဲသနားမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုသာနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရင် ညီမဘ၀တစ်စဆီ ပျောက်ဆုံးသွား လိမ့်မယ်အကို..။ညီမရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းစတွေ ပျောက်ဆုံးကုန်တော့မယ်။ ညီမဘ၀ကြီးအဓိပ္ပာယ် မဲ့ရတော့မယ်။ညီမ ဘယ်လိုမှနောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူး..။ တကယ်တော့ ညီမဘ၀က နွံ့အိုင်ထဲမှာနစ်နေရတဲ့ဘ၀ပါ။ရုန်းထွက်ချင်ပေမယ့် လှုပ်လေမြုပ်လေမို့ ရုန်းထွက်ဖို့ ကိစ္စကိုမစဉ်းစားရဲဘူးအကိုရယ်..။
ခပ်တိုးတိုးငိုကြွေးနေတဲ့ကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီး သူ့ကိုဆုံးမဖို့ စဉ်းစားလာခဲ့စကားလုံးတွေ အလိုလို ပျောက်ဆုံး ကုန်ပါတယ်။ စပွန်ဆာဆိုတဲ့စကားလုံးအောက်မှာ ပျော်မွေ့နေမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့ကောင်မလေး ဆီကကြားရတဲ့စကားလုံးတွေကြောင့် အံ့အားသင့်သလို၊ ရင်ပါနင့်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။မထင်မှတ်ဘဲ အမြင့်ကိုရောက်ခဲ့ရတဲ့သူမ လက်ရှိနေရာပာာ မကောင်းဘူးလို့သိလိုက်ရပေမယ့် သူမဘယ်လိုမှပြန်ဆင်းလို့မရတော့ဘူး။ အမြင့်ဆုံးကနေအနိမ့်ဆုံးကို ရုတ်ရက်ကျဆင်းသွားချိန်မှာ ခံစားရမယ့်နာကျင်မှုတွေကိုလဲ သူမ ကြောက်လို့နေပြီလေ ။
ကျွန်တော်ဆိုင်လေးကနေ ကောင်မလေးနဲ့လမ်းခွဲပြီး ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့်အတွေးထဲမှာ သူမအတွက်ကျွန်တော် တော်တော်တွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့များသူမနစ်မွန်းနေတဲ့နွံ့ထဲကရုန်းထွက်နိုင်မှာလဲလို့ပါ…။
ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မှိတ်တုက်တုက်နဲ့ အလင်းအားနည်းရှာတဲ့ ကြယ်ပွင့်ငယ်လေးတွေပာာ သူတို့ရဲ့ အလင်းရောင်ပိုမိုတောက်ပစေဖို့ အလင်းအားကြီးတဲ့လမင်းကြီးတွေကိုချဉ်းကပ်နေကြပါတယ်။ ဒါပာာကိုယ်ပိုင်အလင်းနဲ့ ထွန်းလင်းတာမပာုက်မှန်းသိလို့ သူတပါးအားကိုးနဲ့ လင်းလက်နေတဲ့ကြယ်ပွင့်လေးတွေကို ကျွန်တော်တို့တွေပာာရှု့ံချမိကြတယ်၊ အပြစ်တင်မိကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မေ့နေခဲ့တာက လမင်းအားကိုးနဲ့တောက်ပနေတဲ့ ကြယ်ပွင့်လေးတွေထဲမှာ အမှန်တကယ် ကိုယ်ပိုင်အလင်းနဲ့ ထွန်းလင်းချင်ကြပေမယ့် အခြေအနေမပေးလို့ လမင်းအလင်းအောက်မှာပဲ ဆက်လက် အလင်းပျောက်နေခဲ့ရတဲ့ ကြယ်ပွင့်လေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာပါပဲ…….။
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 3:47 AM 12 စာဖတ်သူတို့အမြင်
နှမျောစွာပြန်တမ်းတရင်း ငါ့စိတ်တွေ တွေဝေမိတယ်
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 8:26 AM3စာဖတ်သူတို့အမြင်
စာရေးသူ ချောကလက်ကျူးပစ်လေး ပို့စ်ရေးချိန် 8:08 PM6စာဖတ်သူတို့အမြင်